RW Rooble maka dhabeyn-doonaa kalsoonida la siiyay? | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble maka dhabeyn-doonaa kalsoonida la siiyay?
Su'aallo badan ayaa ka taagan hogaanka Rooble oo wali dad badan aaminsan yihiin inuu ku xiran yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble waxaa dusha loo saarey mas'uuliyadda culus oo loo igmaday inuu ku xamiliyo mashaakilkii uu abuuray Farmaajo, ee kala qeybinta, isku-dirka iyo khilaafka hanaanka doorashadda.
Tallaabooyinkii ugu horeeyay ee Rooble waxay ahaayeen kuwa dhanka wanaagsan loo qaadey, waxaana laga soo dhaweeyay dal iyo dibad, Soomaali iyo ajnabi iyadoo soo noolaatay rajadii doorashadda.
"Waxaan ku rajo waynahay inuu shirka noogu billowdo jawi wanaagsan, kuna dhamaado si lagu qanacsan yahay, oo dalka uu ku aadi karo doorashooyin hufan oo la isku raacsan yahay," ayuu yiri Rooble, oo ka hadlayay Shirka maanta loo balansanaa, ee baaqday.
Wuxuu sheegay Rooble inuu qaadi doono tallaabooyinka u fududeynaya inuu ku guuleysto mas'uuliyadda lagu aaminay, sii uusan u lumin kalsoonida la siiyay ee dhanka qabashadda doorashadda iyo amniga.
Rooble ayaa xusay inay ka go'antahay inuu qabto doorasho cidna aan loogu xalin, oo ay u dhanyihiin dhamaan muxaafidka iyo mucaaradka, isagoo iska fogeeyay inuu u janjeero dhanka Farmaajo oo wali saameyn ku leh xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Talooyinka Rooble la siiyay ayaa waxaa kamid ah inuu siyaasad ahaan u madax-banaanaado go'aanada arrimaha masiiriga ah, oo doorashadda ugu horeyso, islamarkaana uu wax ka barto waxyaabaha soo dedejiyay fashilkii Farmaajo.
Rooble waa shaqsi siyaasadda ku cusub, oo aan lahayn khibrado hore dhanka hogaaminta, waxaana usii dheer ma ahan codkar iyo nin go'aannadiisu cad-yihiin, aadna uga gambada Farmaajo iyo Fahad waxaysan ogoleyn inuu sameeyo.
Shirka la filayo inuu Sabtiga ka furmo Muqdisho wuxuu u yahay Rooble tijaabo, isaga wixii kasoo baxa ayaa lagu go'aamin doonaa inuu yahay Ra'iisul Wasaare kasoo dhalaali kara mas'uuliyadda, kalsoonida iyo balan-qaadkii uu sameeyay.
0 Comments Topics: muqdisho rooble soomaaliya